Finday Aza miantso ny fisoratana anarana
Alakamisy Janoary 20, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Toa azo ampiana tsy ho ela ny laharana finday ao amin'ny rejistra Aza Miantso Indiana. Tsy mbola misy teny na hisy fiatraikany amin'ny fandefasan-kafatra an-tsoratra koa io na tsia, saingy tsy isalasalana fa akaiky izany.
The fanjakana mitambatra ary Kanada efa ampidiro ny laharana finday ao amin'ny fisoratana anarana hoe Aza Miantso. Any Etazonia, samy manana i Utah sy i Michigan Aza miantso fisoratana anarana izay efa misy ny antso an-tariby sy ny SMS. Raha ny fahitako azy dia mino aho fa vaovao tsara ity. Mpisolo vava ny varotra miorina amin'ny fahazoan-dàlana foana aho. Amin'ny alàlan'ny fananganana an-tsokosoko ireo fitaovana finday misy olona tanora dia tokony nametraka ny fisoratana anarana ao amin'ny DNC taona maro lasa izay. Mazava ho azy, avy eo ny vola am-polony tapitrisa dolara ho an'ny serivisy finday tsy ara-dalàna dia tsy azo nangonina.
Zava-dehibe izany ho an'ny mpivarotra sy ny mpanome tolotra. Raha mampiasa serasera fandefasan-kafatra na fandefasan-kafatra an-tsoratra ianao dia azonao antoka fa manadio isa ny rezistra ny serivisinao amin'ny fandefasana hafatra. Walter Meyer, filoham-pirenena ary COO an'ny Vontoo - serivisy fandefasana hafatra an-tsoratra sy feo no nilaza fa ny orinasan'izy ireo dia manivana antso miantso fanoherana ny lisitra DNC federaly sy fanjakana.
Ny zavatra tsy tokony ho adino dia ny hoe raha misy orinasa manana alalana an-tsoratra hifandray amin'olona iray dia mety hanao izany izy ireo na dia ao amin'ny DNC aza ny laharan'io olona io. Walter Meyer, Vontoo.
Nanampy i Walter fa ho an'ny lisitra Aza Mifandray amin'ny mailaka sifotra (paositra) ary mailaka ihany koa izy… fandresena ho an'ireo mpivarotra etika sy ho an'ny besinimaro. Walter dia niresaka ny fanamby amin'ny marketing amin'ny feo ary nilaza fa na dia nifantoka tamin'ny marketing tamin'ny lafiny ara-tantara aza i Vontoo, ny fampitomboana azy ireo dia ny fampahatsiahivana, fampandrenesana ary fanadihadiana.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny registries Do Not Call dia tsy mitondra tena mitovy amin'ny mailaka. Amin'ny alàlan'ny mailaka dia azonao atao ny mandefa mailaka voalohany raha toa ka manana fitaovana enti-miala. Amin'izao fotoana izao dia izao no fomba mahazatra ny fandefasan-kafatra an-tsoratra… tsy maintsy misafidy ianao handraisana ny hafatra an-tsoratra ary afaka miala amin'ny fotoana rehetra. Raha vantany vao tafapetraka ny fisoratana anarana (sy ny onitra manaraka) dia tsy afaka mandefa izany hafatra izany akory ianao - raha tsy izany dia mety hampandoa onitra!
Ity misy lisitry ny toerana hahitanao ny lisitra Aza Miantso araka ny fanjakana: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Wisconsin ary Wyoming.
The federaly Aza Miantso Ny firaketana ho an'i Etazonia dia tsy miaro ny mpanjifa finday amin'izao fotoana izao… fa azoko antoka fa efa akaiky ny fanampiana hafatra an-tsoratra sy finday.